Ogqibeleleyo Lixabiso Cima Road Electric Self Ukulinganisela Isithuthuthu - Jomo Technology Co., Ltd
Ogqibeleleyo Lixabiso Cima Road Electric Self Ukulinganisela Isithuthuthu
Uluhlu yenye ingqalelo kubalulekile kanti yakukhetha isithuthi kagesi kuxhaswe. Self ukulingana scooter yezithuthi nesezantsi ngesantya, yonke impahla efana twatse. Developed yi Koowheel, i Hoverboard K7 yi elilodwa lomenzi njenge "imoto yabucala wheel-mbini, self-balancing.". Nokuba ngaba okanye lento sigudle, imidyarho, okanye beya, Hoverboard K7 usoloko izinze. I Hoverboard K7 Self-Ukulinganisela izikuta 8.5inch hoverboard amavili ezinkulu ngaphandle kwendlela, ngoko kwakhona ukudlala ngayo kwakunye amaqhosha aphezulu okanye asezantsi endleleni. Enye Model K5 EZIMBINI ivili SELF balancing isithuthuthu kunye Bluetooth ezimbini nezibane smart ikhokelwa. Umahluko omnye uza kufumana phakathi Segway kunye nebhodi self balancing ezimbalwa na ukungabikho impondo, koko,-50% ubunzima kwicala ngalinye, ukuba ayigcine imali eseleyo auto phambi turn on nasemva turn off, kwaye kakhulu uzinze, lula nekhuselekileyo ukuze bamkhwelise, ingakumbi kwabasaqalayo. Kanye apha Koowheel, uya kufumana enye iimvavanyo zibalaseleyo ngezithuthuthu self-balancing.
I Koowheel Hoverboard yenye phakathi kwabagqibeleleyo "Made in China" self balancing ngezithuthuthu. Kuqikelelwa ukuba eli isithuthuthu ukuba sokugqibela ubuncinane iminyaka eli-10, nto leyo ethetha ukuba ngokuqinisekileyo uza kufumana i kakhulu kwi imali yakho xa ukhetha le self balancing ngezithuthuthu. Ivili ezimbini ezintsha self balancing isithuthuthu yombane . Le isithuthuthu kwakhona sibonisa inkqubo uzinziso kwicala hayi kuvame khona ngezithuthuthu ezahlukeneyo. Ngaphandle koko, kuyabonakala ukuba lo scooter unalo iqonga emi kunye namavili amabini nomtsalane enkulu kwezinye ngezithuthuthu phambili. I- 2 Wheel Ukulinganisela Isithuthuthu izibane 's eziqaqambileyo, yaye uya kukwazi ukusebenza kulo matshini ngokulula ngokunjalo. Ubomi Ibhetri elide kunye eliphilileyo Double inkqubo izithethi Bluetooth kuzisa intlanganisela ogqibeleleyo ngexesha ebusuku kubonakala libalaseleyo ukuba uhambo ekunene, LED izibane amnandi esitratweni, ukuphulaphula umculo nokuba amava balance ogqibeleleyo. Ngapha koko, kukho isiphatho embindini, ukuze kube lula kakhulu ukuba ayizise.
Olu hlobo scooter self-balancing , ngokungafaniyo nabanye, kwafuneka abenzi boluvo 8pcs womxhuzulane, hayi rhoqo Gros 4pcs abicah, sensitive ngakumbi kwaye uzinzile, izinga ezineziphene elisezantsi. Thina sele isicelo lomenzi kwaye non-mthetho kunye Chic, solowheel okanye Bokwemba, ubugcisa ezahlukeneyo ngokupheleleyo kwaye lomenzi zethu. Ukuba eliluhlaza-ngesandla, khetha izinga 'abaqalayo'. Amavili ke uxanduva ixesha elide yaye enzima, kwaye ezi ingaphatha bangenele naluphi na uhlobo elimi ngayo. Amavili kwakhona ancedise abakhweli ukufumana ikhefu ogqibeleleyo xa kuhanjwa. Riding kumnandi-logama nje emazantsi kulula.
ixesha Post: Oct-05-2017